जसपाले किन दियो गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी ? यसकारण मच्चियो रडाको — Sanchar Kendra
जसपाले किन दियो गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी ? यसकारण मच्चियो रडाको
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरिएको प्रति जनता समाजवादी पार्टीले असन्तु्ष्टि जनाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध भएपनि प्रदेश सरकार पुनर्गठनका क्रममा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको हो ।
गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलले अपमान गरेको र केन्द्रीय सहमतिअनुसार अगाडि नबढेको भन्दै जसपाले गठबन्धन बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । जसपाका प्रदेश समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले आफूहरुलाई बाइपास गरिएकाले यथास्थितिमा गठबन्धन रहन नसक्ने बताए ।
‘नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले कुनै जानकारी नदिएर कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएकोमा हाम्रो पार्टीको अपमान गरिएको महसुस भएको छ’, धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चौधरीले भने, ‘केन्द्रीय सहमतिअनुसार अगाडि बढेको खण्डमा मात्र सहमति हुनसक्छ । अन्यथा हामी गठबन्धनमा बस्दैनौँ ।’
शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुँदा आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको जसपाको भनाइ छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा जसपाका एक सांसद छन् ।
जसपाले स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत एक्लै लड्न सक्षम भएको दाबी गरेको छ । यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरु पार्टीलाई किलोको ढक भनेकामा आपत्ति जनाएका छन् । केही दिनअघि ओलीले एमाले क्वीन्टलको ढक हो भन्दै अरु पार्टीलाई किलोको ढक भनेका थिए ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आफ्नो किलो र क्वीन्टल नभई टन (मेट्रिक टन) को बनिरहेको दावी गरे । अहिले प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत समाजवादीको अकार ठूलो भएको भन्दै उनले भने ‘टन मात्र होइन, दशौं टनको बन्दैछ ।’